Muuse Manta Hajeexo Dariiq Cusub Oo Kaduwan Kuwii Hore - Ilays News
Muuse Manta Hajeexo Dariiq Cusub Oo Kaduwan Kuwii Hore
Muuse intuu waxaa iska dhaafo haka weecdo dariiqii silaanyo
Anigu waxaan ahay muwaadin xaq uleh inuu wax doorto Lana doorto,muwaadin rogrogi kara kolba meesha ay wax ka qaloocdaan ilaalinaya midnimadii wixii LA oran jirey British somaliland ee uu engriisku Ka kacay tan iyo waa hore.
Waxaan ahay qof noqon kara siyaasi walise waan masaxbanaanahay.qof kastana waxaan ka qoraa wanaagiisa annigoona u ololeeya khayrka iyo ixsaanka.
Mar walba waxaan ka hadlaa danta guud iyo wax wada lahaanshaha umadan ka kooban afarta milion iyo badhka.
Tan iyo soo noqoshadeenii waxa ina soo maray afar madaxweyne oo mid kastana daruuftiisii iyo waayihiisii watay,base alle wuxuu inagu hagaajiyay gacantii cigaall isagoona seeka u dhigay dawladnimadda iyo qaranimada iyo intan yar ee maanta soomaali ugu faani karno.
Daahir rayaale laftiisu wuxuu ahaa nin cajiiba oo dahaba oo umadan isku wadday oo dulqaad badnaa oo aan dhag u dhigi jirin haddalada mucaaridka reer gebiileyba Ku heesay daahir dabadii dab lama shidan, calaa ayi xaal wuxuu ahaa aabihii dumuqraadiga iyo isku wadka bulshsdeena.
Silaanyo oo ahaa nin balaadhan oo mandiqada xoggogaal badan u ahaa, wasiirana soo noqday tan iyo dawladii dhexe ayaa wakhtigiisa wuxuu alla kusoo beeggay da’ weyni ‘qofka da’dana waxa lagu yiqaan daal badan iyo waxyaalo badan oo da’du iska wadato balse isna qaar Cid u tudhushaynbA ka faaidaystay silaanyo hadda waan u ducaynaynaa. Alla hakaraameeyo silAANYO
Lakiinse muuse waxa looga baahanyahay inuu dhiggo taariikh kawanaagsan wixii hore oo u gasha oo ay jiilalka danbana ugu aayyaan.
Hadda waala ogaaday inayna qabyaaladu waxba tarayn waayo timacadaa yidhi dugsi maleh qabyaaladi waxay dummiso mooyee, muuse ha hagaajisto taariikh danbe salaam